शरीरमा राता डाबर देखिएका छन् ? लाग्नसक्छ लुपुस रोग ध्यान नदिए ज्यान जाने खतरा ! – Khabaarpati
November 3, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on शरीरमा राता डाबर देखिएका छन् ? लाग्नसक्छ लुपुस रोग ध्यान नदिए ज्यान जाने खतरा !
महिलाले पुरुषको के कस्ता कुराहरुमा ध्यान राख्छन् (जानी राखौं)